Imaphi amamaki aphezulu akhona? | Ukwakheka kanye nezifundo
UMaite Nicuesa | 05/01/2022 21:33 | Ukuziqeqesha
Imaphi amamaki aphezulu akhona? Kunconywa ukuthi ukukhetha uhambo lokuqeqesha kuhambisane nobizo lobungcweti. Iziqu eziphakeme zinikeza umfundi ukuqeqeshwa okusebenzayo okuvelele. Nazi ezinye izinketho ongazicabangela manje noma esikhathini esizayo.
1 Iziqu Eziphakeme Emfundweni Yezingane Zasezincane
2 Iziqu Zokuqeqesha Kwezokuphatha Nezezimali
3 Iziqu Eziphakeme ezikhethekile ku-Aesthetics
4 Iziqu ezikhethekile emkhakheni wezokuvakasha
5 Amadigri akhiwe emkhakheni wezempilo
Iziqu Eziphakeme Emfundweni Yezingane Zasezincane
Umkhakha wezemfundo ungenye yezinto ezidingeka kakhulu namuhla. Ochwepheshe abaningi bafuna ukuthuthukisa imisebenzi yabo emkhakheni wolwazi. Hhayi-ke, labo abafuna ukuthola umsebenzi emkhakheni Wezemfundo Yezingane Zasebancane, bangakwazisa lokhu okunye.
Umfundi uthola umbono ophelele wenqubo yokufunda nokufunda kulesi sigaba. Uthisha ungumhlahlandlela kodwa, ngaphezu kwalokho, ukulungiswa kwendawo ngokwayo nakho kubaluleke kakhulu. Ngale ndlela, umfundi uthuthukisa ukuzimela kwakhe endaweni evumelana nezidingo zabo.
Iziqu Zokuqeqesha Kwezokuphatha Nezezimali
El i-formative degree echazwe ephuzwini eledlule inikeza amathuba emisebenzi kwezemfundo. Kodwa kunezinye izindlela zobuchwepheshe ongazicabangela. Ungathanda ukusebenza emhlabeni enkampanini? Umfundi uthola ukuqeqeshwa emkhakheni we-accounting. Ngakho, inamalungiselelo adingeka kakhulu emakethe yemisebenzi yanamuhla. Futhi, ngaphezu kwalokho, uthola iziqu ezingakusiza nasekuqaleni ibhizinisi. Ingabe ufuna ukuphusha ngempumelelo umbono onyakeni omusha? Uma kunjalo, ukubalwa kwezimali kanye nesabelomali kubalulekile ukuze iphrojekthi isebenze esikhathini eside.
Iziqu Eziphakeme ezikhethekile ku-Aesthetics
Kunomnikelo obanzi wezemfundo abafundi abangawuhlola ngaphambi kokukhetha inketho yabo yokugcina. Namuhla, kunamasu ahlukene kanye nokwelashwa okubonisa ukusha okuqhubekayo okwenzeka kulo mkhakha. I-aesthetics, yona, ihlotshaniswa nokuphila kahle. Kunjalo lapho ikhulisa futhi ikhulisa ukuzethemba komuntu siqu. Esigabeni sokuqala sonyaka kunezinjongo eziningi ezithola ukuhambisana okukhethekile. Kanjalo, eminye yemigomo ihlobene nokunakekelwa komuntu siqu. Ngalesi sizathu, leli banga eliphakeme liqeqesha ochwepheshe abathuthukisa umsebenzi wabo kulo mkhakha.
Iziqu ezikhethekile emkhakheni wezokuvakasha
Ezokuvakasha zineqhaza elibalulekile emphakathini wanamuhla. Inikeza okuhlangenwe nakho okuhlobene nenjabulo, ulwazi kanye nokuphila kahle. Ngalesi sizathu, ingomunye wemikhakha enikeza inani eliphezulu lamathuba ochwepheshe. Abaningi babo bathola ingxenye yesizini, njengoba ukuqasha kukhuphuka ngesizini ephezulu. Iklayenti linekhathalogi ebanzi yezinsizakalo eziphendula izidingo zabo.
Kodwa-ke, ulwazi lwakho lokuthenga aluncikile nje kuphela kukhwalithi yenkonzo ngokwayo, kodwa futhi nasekuhloleni kokugcina kokunakekelwa okutholiwe. Ngakho, ukuqeqeshwa kuyisihluthulelo kochwepheshe ukuthuthukisa amakhono abo futhi uzehlukanise nabanye ukuze usebenze kwezokuvakasha.
Amadigri akhiwe emkhakheni wezempilo
Njengamanje, ochwepheshe bezempilo benza umsebenzi obalulekile hhayi kuphela ngokuphathelene nokunakekelwa, kodwa futhi ekukhuthazeni inhlalakahle. Ochwepheshe abaningi basebenzisa izinkundla zokuxhumana, noma babe khona emithonjeni yezindaba ehlukene, ukuze babelane ngolwazi olusha nezeluleko zokuzinakekela emkhakheni walolu bhubhane.
Yebo, umhlaba wezokunakekelwa kwempilo wakhiwe ngenani elikhulu lochwepheshe. Ngalesi sizathu, abanye abafundi bagxila ekufuneni kwabo umsebenzi kulo mkhakha ngemuva kokuphothula iziqu ezikhethekile. I-Higher Degree in Nursing Assistant ingenye yezinketho ezifunwa kakhulu.
Imaphi amamaki aphezulu akhona? Ngaphezu kwezibonelo esezishiwo ku-Training and Studies, kukhona neziqu ezakhiwe emkhakheni we-computer science. Elinye lamagatsha aziswa kakhulu namuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Ukuziqeqesha » Imaphi amamaki aphezulu akhona?